Wariye Axmed Cabdinuur oo Geeriyooday | Aftahan News
Wariye Axmed Cabdinuur oo Geeriyooday
London (Aftahannews) — Mid ka mid ah wariyeyaashuu rug-caddaaga ahaa ee ugu caansanaa laanta Afsoomaaliya ee BBC-da ayaa ku geeriyooday magaalada London ee waddanka Ingiriiska.
Axmed Cabdinuur, oo Soomaalidu ay si weyn magaciisa iyo codkiisaba u yaqaanneen ayaa u geeriyooday xanuunka safmarka ah ee Covid-19, sida ay xaqiijisay xaaskiisa.
Axmed Cabdinuur iyo weriyayaal kale oo ka tirsan BBC
Mar uu ka sheekeynayay taariikhdiisii shaqo ee BBC-da, xilligii uu ka fadhiistay sanadkii 2019-kii, ayuu hadalladan yidhi:-
Wakhti adag ayay ahayd, waayo magaaladu waxay u qaybsanayd waqooyi iyo koofur oo ay kala xukumayeen hoggaamiye-kooxeedyo aad isaga soo horjeeday. Dalkana sharci iyo kala dambayn kama jirin wakhtigaas, BBC-duna waxay ahayd isha keliya ee laga heli karo warar Soomaaliyeed oo sax ah”.
Siyaasiyiinta qaar ama taageerayaashooda ayaa hanjabaad ii soo diri jiray sida “waan ku dilaynaa” marka ay dhibsadaan warbixinta aan sii daayay, waayo waxay rabaan in warka loo dhigo sida ay iyagu jecel yihiin. Mid ka mid ah ayaa maalin igu canaantay “horta maxaad warka u baraxdaa waxa aan kuu sheegay oo keliya maad sheegtid”. Aad ayaan uga taxaddari jiray waxa aan idaacadda ka sheegayo, waxaana iska ilaalin jiray inaan xidhiidh dhow oo gaar ah la yeesho dhinacyada siyaasadda isku haya midkood.
Waxaa kaloo dhibaato ahayd sidii wararka lagu heli lahaa iyadoo isgaadhsiintii dalku burburtay markii ay dhacday dowalddii milateriga 1991-dii.
Marka aad warka diyaarisana waxaa dhib ahayd sidii aad u soo diri lahayd sababtoo ah Internet iyo telefoonka gacanta ma jirin waxaa keliya oo la adeegsan jiray telefoonka guriga oo tayadiisu aanay aad u wanaagsanayn. Codadka iyo waraysiyada waxaan ka shidi jiray rikoodh markaas ayaan telefoonka saari jiray si studio London loogu duubo.
Wariye Axmed Cabdinuur
Si dhakhso ah ayaan ugu soo caanbaxay shaqada fiican ee Muqdisho aan ka qabtay wuxuuna madaxii laanta, Maxamed Cabdullaahi ii fidiyay fursado aan ku sii horumaro sida tababarro aan London u imid iyo inaan marmar si ku-meel-gaadh ah uga shaqeeyo xafiiska Nairobi oo berigaas uu joogay Allaha u naxariistee Axmed Maxamed (Taajir) oo keliya.
Intii aan xafiiskaas ka shaqeynayay waxaa dhacay qaraxyadii Al-Qaacida ku qaadday safaaradaha Maraykanka ee Nairobi iyo Daresalam. Keligey ayaa wakhtigaas xafiiska joogay, waayo Axmed London ayuu ku maqnaa. Idaacad kasta oo baxaysa war ayaan u soo diri jiray.
Markii dambena, sanadkii 2000 London ayaa shaqo laga iga siiyay, muddo sanad iyo badh ah dabadeedna waxaan qaatay fasax lacag la’aan ah.
Laba sano kaddib ayaan BBC-da ku soo laabtay wixii wakhtigaas ka dambeeyayna London ayaan ka shaqeynayay marna weriye madax bannaan ayaan ahaa marna shaqaale rasmi ah.
BBC waa hay’ad aad u wanaagsan marka la eego qaddarinta shaqaalaheeda iyo ka go’naashaha inay dhegeystayaasheeda siiso warar run iyo dhexdhexaad ah.ayuu waraysiga ku yidhi Axmed Cabdinuur.